Salish Splash, nekusvika kwezhizha rangarira kuti yako Apple Watch haina mvura | Ndinobva mac
Salish Splash, nekusvika kwezhizha rangarira kuti yako Apple Watch haina mvura
Apple ndeimwe yemakambani ayo dzimwe nguva anogona kutishamisa nekusataura zvinhu zvakajeka kana nekungoratidza zvese maficha ane mudziyo wako muhurukuro yavo. Iyi ndiyo kesi yeApple Watch, hongu, iyo Apple smart wachi ine peculiarity yekuti apo mushandisi akaitenga ikaburitswa pamusika zvaive zvisina kujeka kuti kana vangapinda mumvura nazvo here, kana vachigona kugeza kana ingo nyorova, nezvimwe. Ipapo CEO wefemu iye akazopedzisira abuda achitsanangura kuti Apple Watch inogona kunyorova (kuti akageza newachi iri) asi zvaisakurudzirwa kuinyudza.
Asi panguva iyo wachi payakatanga kutengeswa, vashandisi vazhinji vakatanga kuisa wachi muhombe, mugungwa, kunyangwe kudziisa muhari dzemvura irikufashaira kuti iratidze kuramba kwayo uye yaiita kunge inomira nemiedzo uye nemvura zvakanaka. Muchidimbu, zvese zvinhu inyonganiso nenyaya iyi yekushomeka kwemvura Uye ndosaka ini pachezvangu ndichiibvisa kunogeza, pandinoita mitambo uyezve ndinofanira kuichenesa izvo zvandinowanzoisa pasi pepombi sekutsanangura kunoita Apple nekushandura korona kubvisa tsvina ndokuzoomesa. Parizvino zero matambudziko.
Asi Apple inoda kuti iwe utarisire wachi yako ino chirimo Uye ndosaka kubva kuApple Suport account yavanayo paTwitter akatitumira iyi tweet:
Shambidza kuputika. 💦 Kushandisa yako Apple Watch padyo nemvura? Verenga izvi kutanga: https://t.co/W43I1Yz6gi pic.twitter.com/MVptXYXUG2
- Apple Tsigiro (@AppleSupport) 20 de julio de 2016
Izvi ndizvo zvatinowana pane webhusaiti yeSpain maitiro ekuchenesa nekuomesa yako Apple Watch:
Iwe unofanirwa kuchengeta iyo Apple Watch yakachena uye yakaoma. Shandisa isina-hasha, isina-jira. Mimwe mienzaniso inosanganisira imwe. Iyo Apple Watch inopesana nekupwanya uye kusangana nemvura (asi kwete kunyudza), unogona kunyorovesa jira nemvura inoyerera.
Iwe haufanire kushandisa sipo, kuchenesa zvigadzirwa, kana zvinyoro zvinhu paApple Watch. Mhepo yakamanikidzwa kana sosi yekunze yekupisa senge inoomesa bvudzi inogona kukuvadza mudziyo.
Tevedza nhanho idzi kuchenesa Apple Watch:
Bvisa Apple Watch uye uibvise kubva mundiro.
Chenesa Apple Watch nejira rinosangana nezvinodiwa. Kana zvichidikanwa, unogona kunyorovesa jira nemvura inoyerera.
Pukuta iyo Apple Watch nejira rinosangana nezvakakurudzirwa zvinodiwa
Muchidimbu, tinofanirwa kuve pachena kuti wachi inobata mvura asi zvinokurudzirwa kuti usanyorove zvakanyanya, nekuti kana ukatambura nedambudziko zvinokwanisika kuti kambani inoshamba maoko pamusoro wenyaya uye isu tinofanirwa kuenda kunotora kuti tigadzirise dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Salish Splash, nekusvika kwezhizha rangarira kuti yako Apple Watch haina mvura
BitTorrent Live inouya kuMac mune yayo beta vhezheni